I-The Inn at the Creamery1 - I-Airbnb
I-The Inn at the Creamery1
Igumbi e-i-boutique hotel ibungazwe ngu-Christine
U-Christine Ungumbungazi ovelele
Lala ekamelweni elihle endaweni esanda kulungiswa (2017) engokomlando ye-Telkwa Creamery emfuleni i-Wallley. I-Inn inamakamelo amane nendawo enkulu ehlanganyelwayo lapho kutholakala khona isidlo sasekuseni esisemgangathweni. Umnyango olandelayo yi
i-coffee roastery encane (i-Reel Coffee).
I-Inn idlulela emgwaqweni isuka e-Wallley River. Kukhona i-verandah eceleni kwengaphambili ne-patio encane endaweni yengadi.
Sicela uqaphele: asizithathi izilwane ezifuywayo.
Leli kamelo yisihlalo sabaphila nokukhubazeka i-visa iminyango, ukuphakama kombhede, i-closet negumbi lokugezela. Indawo yokugcina "yindlu yokugezela emanzi" enezinsimbi zokubambelela nesihlalo seshawa esigoqwayo.
I-Telkwa yidolobhana elincane elisemfuleni we-Bulkey ne-Telkwa elingamakhilomitha angu-15 ukusuka e-Smithers. Amasevisi endawo ahlanganisa: isitolo esincane sokuthenga ukudla, indawo yokudlela evulekile ngezikhathi ezithile, iloli lokudla, (entwasahlobo nasehlobo), ukuma kwe-ice cream, isiteshi segesi, i-studio se-yoga, isitolo sovolo, "Igumbi Lokufunda" (umtapo wolwazi), i-parlour yase-Greece, isaluni yezinwele... (lokhu akulona uhlu olukhululekile!) Kukhona ukudoba emfuleni, ukugwedla phansi komfula kanye nokuhambahamba okuhle eceleni komfula edolobhaneni nasemzaneni.
I-Tyee Lake Regional Park iqhele ngamakhilomitha angaba ngu-4 - ukubhukuda, i-picnicking, ukukhempa
Ziningi izindawo zokudlela, izitolo namasevisi e-Smithers.
Asihlali endlini kodwa siyatholakala ngokwesidingo.
UChristine Ungumbungazi ovelele